नेपाल आज | युवतीहरू विहेको अघिल्लो रात मनमा यस्ता अनौठा कुरा खेलाएर बस्छन्
युवतीहरू विहेको अघिल्लो रात मनमा यस्ता अनौठा कुरा खेलाएर बस्छन्
एजेन्सी - युवतीहरू विहेको अघिल्लो रात मनमा यस्ताे अनौठा कुरा खेलाएर बस्छन् । जसले उनकाे प्रभाव पार्छ। कसैले मन भित्र साेचेकाे कुरा कसैलार्इ थाहा हुदैन तर युवतीहरूको मनमा विहेकाे अघिल्लाे रात यस्ता कुरा खेल्छन जुन तपार्इ हामी साेच्न फ्याउँदैनम्। तपाइले अनुमान गर्नुभएको छ ?
युवतीहरूमा अघिल्लो रात विभिन्न कुराहरू खेल्न सक्छन् । जसकारण उनीहरू यस विषयमा केही चिन्तित पनि हुन्छन् । बन्धनमा बाँधिएपछिको पहिलो रात के होला भन्ने कुराहरूमा युवतीहरू अल्झिन सक्छन् । यसकारण मुटुको धड्कन पनि बढ्न सक्छ । हेर्नुहोस् कस्ता कुराहरू खेल्दा रहेछन् युवतीहरूको मनमास्
विहेलाई लिएर युवतीको मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्नु स्वभाविक हो । मानिसलाई लाग्न सक्छ युवती विहेपछि हनिमुनको बारेमा सोच्छन् । तर, यस्तो हुँदैन । उनीहरुको मनमा के आफू विहे गरेर ठूलो जिम्मेवारी लिने भइसकेछु र ? के विहेका लागि आमा बाबुसंग समय माग्नुपर्छ रु लगायतका प्रश्नहरु उब्जिन्छन् ।
युवतीलाई विहे हुनुभन्दा एक रात पहिलेनै के म्रले पोइली घरमा माइती घरको जस्तै व्यवहार पाउँछु रु के मलाई मनैदेखि अपनाउँछन् रु त्यो भन्दा बढी युवती हुनेवाला सासुआमाको बारेमा सोच्न गर्छन् ।